Imidwebo - Umagazini Design
Sonto 21 Novemba 2021
Iwebhusayithi I-Upstox ngaphambili eyayixhaswe yiRKSV iyi-online stock stock stock. Imikhiqizo ehlukanisayo eyakhelwe abathengisi be-pro-layman ingenye ye-USP enamandla kakhulu ye-Upstox kanye nesikhulumi sayo sokufunda samahhala sokuhweba. Lonke isu kanye nomkhiqizo kwaqokwa ngesikhathi sesigaba sokuqamba esiteshini sikaLollypop. Abaqhudelana ngokujulile, abasebenzisi kanye nocwaningo lwemakethe basize ekunikezeni izisombululo ezakha ubunikazi be-webhusayithi. Imiklamo yenziwa isebenzisana futhi inembile ngokusetshenziswa kwemifanekiso eyenziwe ngokwezifiso, izithombe nezithonjana ezisiza ekwephulweni kwemininingwane yewebhusayithi eqhutshwa imininingwane.
Mgqibelo 20 Novemba 2021
Ukusetshenziswa Kwewebhu Ipulatifomu esekwe nge-Batchly SaaS inika amandla amakhasimende we-Amazon Web Services (AWS) ekwehliseni izindleko zawo. Idizayini yohlelo lokusebenza lwewebhu kumkhiqizo ihlukile futhi iyathandeka njengoba inika amandla umsebenzisi ukwenza imisebenzi ehlukahlukene kusuka endaweni eyodwa ngaphandle kokushiya ikhasi futhi icubungula nokunikeza umbono wokubuka iso lenyoni yayo yonke imininingwane ebalulekile kubaphathi. Ukugxilwe nakho kunikezwe ukwethula umkhiqizo ngewebhusayithi yayo futhi yakhelwe ukuxhumana nge-USP yayo ngemizuzwana yokuqala eyi-5 uqobo. Imibala esetshenziswe lapha iyakhanya futhi izithonjana nemifanekiso zisiza ukuthi iwebhusayithi isebenzisane.
Lwesihlanu 19 Novemba 2021
I-Tableware IBamirla imela i-Hungary Bátor Tábor okuyindawo ekamu yezingane ezinomdlavuza noma okunye ukugula okungalapheki. Inhloso yalokhu kuklama ukudlulisela umkhathi wekamu kubasebenzisi ngezinhlaka eziyindilinga, ezidlalayo, ukusetshenziswa kwemibala kanye nomlingiswa wobuciko nezobuciko. Imihlobiso ibhekisa ekamu futhi isuselwa kule mibono emithathu elandelayo: ilogo lekamu, indawo yokuhlala yezingane kanye nemidwebo yezindlu. I-tableware ivame ukusekela izindlela zokudla ezinempilo ngakho-ke zamukelwa kokudla okuncane-okuncane-okuvame ukuzijwayeza ngobukhulu bazo.
Lwesine 18 Novemba 2021
Ukwethulwa Kwemiklomelo Lesi sigaba sokugubha saklanywa ngokubukeka okuhlukile futhi sidinga ukuguquguquka kokwethula uhlelo lomculo nezinye izethulo zemiklomelo ehlukahlukene. Izicucu ezisethiwe zazikhanyiswe ngaphakathi ukufaka isandla kulokhu kuguquguquka futhi kufaka phakathi izinto ezindizayo njengengxenye yesethi ebipheshwa ngesikhathi sombukiso. Lo bekungumkhosi kanye nemiklomelo yonyaka yemiklomelo yenhlangano engenzi nzuzo.
Lwesithathu 17 Novemba 2021
Ibhodlela Umklamo webhodlela lasolwandle i-North Sea Spirits ugqugquzelwa yimvelo eyingqayizivele ye-Sylt futhi ufaka ubumsulwa nokucacile kwaleso simo semvelo. Ngokuphikisana namanye amabhodlela, ama-Skype aseNorth Sea ambozwe ngokuphelele yi-coating coating engenasici. I-logo iqukethe i-Stranddistel, imbali etholakala kuphela kwi-Kampen / Sylt. Ukunambitheka ngakunye kwezingu-6 kuchazwa umbala owodwa ngenkathi okuqukethwe kweziphuzo ezi-4 zokuxuba kufana nombala webhodlela. Ukuhlanganiswa kwengaphezulu kukhipha i-handfeel ethambile futhi efudumele bese isisindo singezela kumbono wenani.
Lwesibili 16 Novemba 2021
Irekhodi Le-Vinyl I-9 yokugcina ibhulogi lomculo ngaphandle kokulinganiselwa kohlobo; isici sayo ikhava yesimo sokuxhuma nokuxhumana phakathi kwengxenye ebonakalayo nomculo. Abangu-9 bokugcina bakhiqiza izingoma zomculo, ngayinye iqukethe ingqikithi yomculo eyinhloko eboniswe embonweni wokubuka. I-Tropane Llightouse iyinhlangano ye-15 yochungechunge. Le projekthi ibigqugquzelwa yimisindo yehlathi lasezindaweni ezishisayo, futhi ugqozi olukhulu ngumculo womculi nomculi uMtendere Mandowa. Isembozo, ividiyo ye-promo kanye ne-vinyl disc pack kwenziwa kule phrojekthi.
calendar 2013 “Safari” Ikhalenda Mgqibelo 27 Novemba
good morning original calendar 2012 “Farm” Ikhalenda Lwesihlanu 26 Novemba
inci I-Ceramic Lwesine 25 Novemba
Design Ingxoxo kosuku Mgqibelo 27 Novemba
Design legend losuku Lwesihlanu 26 Novemba
Umklamo wosuku Lwesine 25 Novemba
Umqambi wosuku Lwesithathu 24 Novemba
Iqembu lokuklama losuku Lwesibili 23 Novemba
Iwebhusayithi Ukusetshenziswa Kwewebhu I-Tableware Ukwethulwa Kwemiklomelo Ibhodlela Irekhodi Le-Vinyl